The Nintendo Classic Mini agaghị enweta ọtụtụ egwuregwu ma ọ bụ njikọ internetntanetị | Akụkọ akụrụngwa
Nyaahụ, ọtụtụ ndị ọrụ malitere ịchekwa ịjụ ndị eze atọ maka NES Classic Mini, obere reissue nke kpochapụwo NES console nke ndị nrụpụta Japan kwupụtara. Ihe ngosi ọhụrụ a ga-abịa na egwuregwu 30 nke arụnyere na mbụ, ọnụ ahịa ya bụ $ 59,99. Ma anyị ga-enwe ike zụta onye nchịkwa ọzọ maka euro 9,99, ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu abụọ. Ihe njikwa a na-agbanwe na teknụzụ ọhụrụ ma nwee njikọ HDMI iji jikọọ na telivishọn anyị na-enweghị iji RCA ma ọ bụ Euroconnector veto.
Ruo ezigbo nsogbu Nsogbu a na - abịa n’echiche nke Nintendo ịmalite ngwaọrụ a wee chefuo ya. Dị ka akwụkwọ akụkọ Kotaku si kwuo, ụlọ ọrụ Japan na-ekwu na njikwa ahụ agaghị enwe njikọ internetntanetị iji nwee ike ibudata ọtụtụ egwuregwu ka ndị Japan wee gbakwunye na njikwa ahụ. N'ihi ya na-ike gwụrụ nke 30 tupu-arụnyere egwuregwu na console ga-abịa na, anyị ga-aga n'ihu ịchekwa ya na kọlọtọ iji chefuo afọ 30 ọzọ
Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ị ka nwere egwuregwu site na njikwa mbụ, ị ga-edebe ya n'ihi na ị gaghị enwe ike iji ya na nyocha a, ma ọ bụ site na mpaghara ọ bụla nke Nintendo nwere echiche ọ bụla launching. Eziokwu a nwere ike ime ndị ọrụ niile zubere inweta njikwa a na ọnwa ndị na-abịanụ, gbanwee obi gị ngwa ngwa ma nintendo hụ ọ yourụ gị na olulu mmiri.
Ọ nwere ike na-eri Nintendo obere iji nye a console na internet njikọ na ọ ga-n'ezie na-eri obere na-agwa ndị mmepe nke oge imeghari ma ọ bụ na-enye ha egwuregwu na ịntanetị na a belata price, dị ka ma ọ bụrụ na ha bụ egwuregwu n'ihi na mobiles aka , ma ọ dịghị ihe. Nintendo na-aga n'ihu na isi ike ya nke na-achọ ime ihe ọ bụla masịrị ya n’enweghi uzo ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nintendo Classic Mini agaghị enweta egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ njikọ internetntanetị
2299 Yuan ga-efu Meizu MX6